10 Hugely influluent Classic Golf Instruction Books
Ireo boky malaza ireo dia nisy fiantraikany teo amin'ny taratra mpilalao golfers sy ny mpilalao golf hafa
Betsaka ny boky fampianarana an-tsekoly nosoratan'ny mpilalao lehibe indrindra ao amin'ny lalao, sy ireo mpampianatra lehibe, taloha. Ny sasany amin'ireo boky ireo dia mbola raisina ho anisan'ny boky fanabeazana golf tsara indrindra any. Ity ambany ity ny lisitry ny pikantsarin'ny boky fampianarana "classic" golf. Mbola manampy ireo mpilalao golfa ankehitriny ireo boky ireo, ary samy nandray anjara tamin'ny fototry ny fomba fampianarana ankehitriny izy ireo.
Raha naka fanadihadiana momba ny mpilalao golfa matihanina ianao, dia mety ho voafidy ho toy ny boky fanabeazana golf manam-pahaizana indrindra izay nosoratan'i Ben Hogan foana. Iza no tsy te-hahalala ny tsiambaratelon'i Hogan? Tsy voatery ho mora ny mamaky ny golfero midadasika, saingy mitohy manan-kery lehibe amin'ny mpampianatra - sy mpianatra matotra - amin'ny lalao.
Harvey Penick dia teo amin'ny faha-80 taonany rehefa nivoaka io boky io, ary io boky io dia tao anatin'ny roapolo taona nanontana azy. Na izany aza, ny teny anatiny dia natsangana nandritra ny 60 taona niorenan'i Penick, izay nalaina tamin'ny taratasy kely navoakan'i Penick ary nangonina farany. Izy io no lasa bokim-pampahalalam-baovao malaza indrindra amin'ny golf.
Izy no mpilalao lehibe indrindra-ary ny sasany dia hifamaly ny mpilalao lehibe indrindra-izay efa fantatry ny golf hatramin'izay. Ny bokin'i Bobby Jones dia natao ho fototry ny sombin-tsarimihetsika izay navoaka voalohany tao amin'ny teatra tamin'ny alàlan'ny fampidinana ny The Golf Channel. Mahavariana ny mijery ny tari-dalan'ny golf avy amin'ny taona 1920 sy 1930.
Ernest Jones dia iray amin'ireo mpampianatra "superstar" voalohany mpilalao golf. Nampianariny am-polony taona maro lasa izay, fa ny zavatra nampianariny-no namintina ny lohatenin'ity boky mahazatra ity-dia mbola misy fiantraikany amin'ny mpilalao golf sy ny mpampianatra.
Ny tafika Tommy fitaovam-piadiana dia nilalao ny toerany tsara indrindra nandritra ny fotoana fohy, nandresy maherin'ny in-30 tao amin'ny PGA Tour , anisan'izany ny telo lehibe. "The Silver Scot" dia nisotro ronono avy amin'ny golf profesora nandritra ny taona 1930, ary lasa iray amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy tena nahazo valisoa indrindra. Ny fampianarana ao amin'ity boky ity dia nampidirina ho sarimihetsika filalaovana golf izay azonao jerena ao amin'ny YouTube.
Percy Boomer dia mandresy an'i Ernest Jones ho mpampianatra manan-kaja indrindra sy manan-danja indrindra amin'ny lalao tamin'ny vanim-potoan'ny Ady Lehibe II sy taloha. Ao amin'ny Learning Golf dia navoaka voalohany tamin'ny taona 1946 ary namoaka fanontana maherin'ny 20 toy ny mpilalao golfa maoderina hamantatra izany hatrany. Boky iray hafa izay tena nanan-danja tokoa tamin'ny mpilalao golf.
Miaraka amin'ny boky Mena Mena i Harvey Penick, ny Golf My Way dia iray amin'ireo boky roa farany indrindra amin'ity lisitra ity. Ny Jack Nicklaus 'tome dia navoaka voalohany tamin'ny taona 1974, ary nahatakatra avy hatrany ny toetrany taloha. Naverina imbetsaka izy io, ary maro ny sivana (anisan'izany ny horonan-tsary malaza sy DVD). Raha te-hahafantatra ny fomba nanatonan'ny Mpiara-maina ny lalao dia ny bokin'i Nicklaus dia ho anao.
Ny Harry Vardon dia nihevitra fa ny "golf" voalohany golf. Izy no voalohany nanofa tamina orinasam-pitaovana ary namokatra klioba an-jatony tsy an-kiato, izy no golfa britanika voalohany ho an'ny oram-barotra amerikana ary nahatonga vahoaka marobe, ary izy no iray tamin'ireo voalohany nanoratra ny bokiny momba ny fampianarana. Ny bokin'i Vardon dia fijerena tsara ny fisainana momba ny golf izay nisy tamin'ny taonjato faha-20.
Ny sasin-teny dia The Approach Scientific Approach To Growth Improve Your Game . Tamin'ny taona 1960, ny mpahay siansa amin'ny sehatra ara-pahasalamana sy ny anatomie ho an'ny fanatanjahan-tena dia nandany enim-bolana nandritra ny fianarana am-pilaminana lalindalina kokoa tao amin'ny British PGA. Avy eo ireo mpilalao golf dia nahita ny fikarohana - iray amin'ireo fanadihadiana ara-tsiansa voalohany momba ny fiarandalamby golf-ary nampihatra ny fampahalalana momba ny golf. Ity boky ity dia nisy fiantraikany teo amin'ny mpampianatra maro.
I John Jacobs dia iray amin'ireo mpampianatra mpilalao golf manintona indrindra amin'ny mpiara-mianatra aminy, izay mety ho anisan'ny mpiara-mianatra aminy kokoa noho ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Mazava ho azy anefa, rehefa mandeha ny fotoana, dia midika izany fa nanan-kery teo amin'ny vahoaka i Jakôba. Ity boky, izay nivoaka tamin'ny taona 1970 tany am-piandohana, dia pejy 144 miaraka amin'ny sary famantarana eo amin'ny sary.
Famaritana sy famahana ny fihantsiana
17 Safidy haingana sy mora ho an'ny mpilalao golfing sy mpitsabo mahay
DVD ho an'ny fampianarana ho an'ny mpilalao golf
Inona no dikan'ny mena mena midorehitra na làlan-doha amin'ny gara?
Inona no atao hoe mpitsabo mahay indrindra?
5 Fiovan'ny toetr'andro goavana rehefa mila manamboatra kitapo golf ianao
Tafika Gulf Izay Manjavona Tsara Amin'ny Flight
Torolalana amin'ny dingana tsikelikely mankany amin'ny toeram-pilalaovana goavana tsara
Ny 'Big Break'
Helotsaoka amin'ny gidra miankavia fa maivana: Fahamarinana sy famahana
Fitsipika Golf amin'ny fomba fijery
Kitendry hitsin-dalana ho an'ny mpitondra fiara 460cc
Boky momba ny vehivavy silamo
Ireo efitrano tsara indrindra eran-tany
Ergonomic Lighting Levels by Room for Spaces Residential
Famindrana ho an'ny fampiharana ny taratasy fangatahana
Ohatra tsara amin'ny taratasy fanolorana fankasitrahana
Tokony ho Double Major ve aho?
Moon in Gemini - Ny famantarana ny Moon Moon
Mila fahaizana isan-karazany ny fianarana ho an'ny Graduate School vs. College
AdBlue Fluid sy Clean Diesels
Ny antony mahatonga ny andiam-basy efa simba amin'ny faran'ny tanjona dia mbola eo an-tariby lavitra kokoa
'Manana, iza no manana?' Math Games
'Nohazavaina ny teny hoe Pearl'
Iza ireo Evanjelistra efatra ireo?
Inona no dikan'ny hoe mamadika azy ao C ++?
Dingana Lehibe ho amin'ny fidirana ao amin'ny Top Michigan Colleges
Hevi-diso: Sarotra kokoa ny ho kristiana noho ny tsy mpino tsy mpino
Asa sy Adoloky amin'ny Moyen Âge
Mijanona ary tsy misy ilana azy
Inona ny fiantraikan'ny Charlie Charlie, ary nahoana no mipoitra ny olona?
Delaware Valley College Admission
Inona no dikan'ny teny anglisy "RSVP"?
Famaritana sy Ohatra amin'ny teny Anglisy